Xog: Turkiga oo Hubkii ugu Horeeyay ee ay Farsameeyaan u soo dhoofiyay Somalia. – Hornafrik Media Network
Qorigii ugu horeeyay ee ay Turkey Dalkooda ku sameeyaan oo lagu magacaabo MPT-76 ayeey billaabeen inay u dhoofiyaan meel ka baxsan Dalkooda.
Illo Wareedyo ka tirsan Warshadaha Ciidanka Turkish-ka oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa u sheegay Wakaaladda Wararka Dalkooda ee Anadolu in la go’aamiyay in la kordhiyo wax soo saarka Qoryahan. Waxayna qorshaynayaan 3 Waji oo ay soo kala saarayaan 20,000, 15,000 iyo 10,000.
Qoriga MPT-76 waxaa loo sameeyay Ciidanka Lugta Turkey si ay uga guuraan Qoriga G-3 ee Jarmalku farsameeyo, isla markaana loo yareeyo ku tiirsanaanta Warshadaha Hubka ee Dalalka kale laga leeyahay.
Warshadda Ciidamadda Turkey waxay dirtay 3,200 Qori, kuwaasoo 500 ka mida la siiyay Madaxtooyadda, Waxay sidoo kale Soomaaliya u direen 450 Qori, si ay ugula dagaalamaan Kooxaha Argagixisadda ah, halka Jamhuuriyadda Turkey ee Waqooyiga Cyprus-na la siinayo 2,500 Qori.
Qorigan oo Cabirka Dhuuntiisa lagu sheegay 7.62 Millimeter waxa uu u shaqaynayaa sida G-3, Waxa la isugu halayn karaa sida AK-47, Waxaana loogu dagaalami karaa sida M-16, ayaa lagu yiri Warbixin Qorigan MPT-76 looga hadlayay. Waxayna Warbixinta intaasi ku dartay in Xabadiisu ay gaari karto 600 Meter, isla markaana uu awood u leeyahay Daqiiqadiiba inuu rido 700 Xabbo.
Fears US funds for Somalia diverted to Al-Shabaab